ရင်ကျပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းဖို့ ငါးအရှင်တွေမျိုချတဲ့ ကုထုံးနဲ့ ဆေးကုသမှုပြုလုပ်
အိနိ်္ဒယနိုင်ငံမှာ ရင်ကျပ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ သူတွေကို ငါးအရှင်တွေ မျိုချပြီး ကုသတဲ့နည်းနဲ့ ဆေးကုသမှုပေး နေကြောင်း သိရပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဇွန်လကိုရောက်တဲ့ အခါမှာ ရင်ကျပ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ အိနိ်္ဒယနိုင်ငံတစ်ဝန်းက လူတွေဟာ တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဟိုက်ဒါဘတ်မြို့ကို ရောက်ရှိ လာပြီး ဆေးကုသမှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီကုသနည်းဟာ ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာ အစဉ်အလာ ဆေးကုသနည်း ဖြစ်ပြီး ဘာတီနီဂေါ့ မိသားစုက ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ခဲ့ကာ နှစ်ပေါင်း (၁၅၆) နှစ်တိုင် ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ကျပ်ရောဂါ ရှိနေတဲ့သူကို အ၀ါရောင်ပတ် ထားတဲ့ အရာထဲကို ငါးစင်တီမီတာရှိတဲ့ ငါးတစ်ကောင်ထည့်ပြီး မျိုချစေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာအရာတွေ ပါဝင်သလဲဆိုတာ လျှို့ဝှက်မှု ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သုံးနှစ် ဆက်တိုက် ကုသမှုတွေ ခံယူပါက အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးကုသမှု ခံယူ ထားတဲ့ သူဟာ (၄၅) ရက် အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို တိကျစွာ လိုက်နာသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေဟာ ဟိုက်ဒါဘတ်မြို့ကို လာရောက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ ကြပါတယ်။ ပွဲတော် ကာလအတွင်း နှစ်ရက်တာ အခမဲ့ ဆေးကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ငါးအရှင်ကို မျိုချဖို့ ပါးစပ်ကို ကျယ်လောင်စွာ ဟထားရမှာဖြစ်ပြီး အချို့ကလေးငယ်တွေ ကတော့ ကြောက်ရွံ့ပြီး ငိုကြွေးကြပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေက ဒီကုထုံးကို ဝေဖန်နေကြပေမယ့် ယုံကြည် သက်ဝင်သူတွေ များပြားတာ မို့ အိနိ်္ဒယအစိုးရ အနေနဲ့ သွားလာဖို့ မီးရထားတွေ စီစဉ်ပေးတဲ့ အပြင် လူအုပ်ကို ထိန်းနိုင်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ ချပေးလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နယ်သာလန် နိုင်ငံသား အသက် (၅၅) နှစ် အရွယ်ရှိ ၀င်ဟော့ဖ်ဟာ ဂင်းနစ်စံချိန် (၂၁) ခု တင်ရှိထားပြီး ထူးခြားလှတဲ့ အံ့မခန်း စွမ်းဆောင်ရည် တွေကြောင့် ရေခဲလူသားအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံခဲ့ ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဟော့ဖ်ဟာ သာမန်လူတွေ မစွမ်းဆောင်နိုင်တာကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲအမှတ် သုညဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်အောက်အေးတဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတန်းမှာ အ၀တ်အစားမပါဘဲ ဘောင်ဘီတို တစ်ထည်နဲ့ ပြေးပြခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး ဧ၀ရတ်တောင်ကို အ၀တ်အစားမပါဘဲ ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည် ၀တ်ဆင်ပြီး တက်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် ရေခဲလူသားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငါးဦးဖခင်ဟော့ဖ်ဟာ ရေခဲကန်ထဲမှာ အချိန်အကြာဆုံးနေပြတဲ့ စံချိန်ကိုလည်း တင်ရှိထားပါတယ်။ လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပူချိန်လျော့ကျ သွားပါက အန္တရာယ်ရှိပေမယ့် ဟော့ဖ်ကတော့ အပူချိန်ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း ရမလဲဆိုတာ သိရှိထားပါတယ်။
ဟော့ဖ်က ကျွန်တော်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဧ၀ရတ်တောင်ကို ဘောင်းဘီတို နဲ့ တက်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ရေခဲတမျှ အေးတဲ့ ရေချိုးကန် ထဲကို ၀င်ရောက်ရာမှာလည်း အတွေ့အကြုံ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ယုံကြည်မှုကြောင့် လုပ်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဟော့ဖ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူချိန်ကို ဦးနှောက်နဲ့ အသိပေး ထိန်းချုပ်နိုင်တာမို့ သာမန် လူတွေထက် အအေးဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟော့ဖ်ဟာ သူ့ရဲ့နေအိမ် ပန်းခြံအတွင်းမှာ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဧ၀ရတ်တောင်ကို တက်ရာမှာ ပေ (၅၀၀၀) အရောက်မှာ ခြေထောက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့လို့ လှည့်ပြန်ခဲ့ ရပေမယ့် နမီးဘီးယားမှာရှိတဲ့ သဲကန္တာရ ဖြတ်ပြေးပွဲ တစ်ခုမှာ ရေလုံးဝ မသောက်ဘဲ ပန်းဝင်အောင် ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ.သင်္ဃန်းကျွန်းမြို.နယ်၊ ဇ/မြောက်ရပ်ကွက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ.မှအင်အားသုံး ဖယ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားရာ ပြည်သူများမှ ၀ိုင်းဝန်းတားဆီးကန်.ကွက်မှုဖြစ်ပွား။
ယနေ. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို.နယ်၊ ဇ/မြောက်ရပ်ကွက်တွင် ဘာသာခြားလူမျိုးတစ်ဦး
တရားရုံးမှ အနိုင်ဒီဂရီရမှုအပေါ် နှစ်ပေါင်း(၆၀) ကျော်နေထိုင်လာခဲ့ကြသည့်
နေအိမ်(၆၂)လုံးအား ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်များမှ အင်အားသုံးဖယ်ရှားရန် ရောက်ရှိ
လာသည့်အတွက် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှ ၀ိုင်းဝန်းကန်.ကွက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့
၁၉၆၂ ခုနှစ်ကဦးမိုဟာမက်ဟာရှင်အာရစ်(ခ) ဦးမာမွတ် ပိုင်ဆိုင်အမည်
ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအဆိုပါ လူမျိုးခြားပုဂ္ဂိုလ်မှ နိုင်ငံခြား
အဆင့်ဆင့်ဖြင့် နောက်ဆုံး ဒေါ်အုန်းခင်(ခ)ဒေါ်ချိူတီ ဆိုသူ၏ သားဖြစ်သူ
ဦးသန်.ဇင်ဆိုသူမှာ နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော် နေထိုင်လာခဲ့ကြသူများအပေါ် တရားစွဲဆိုလျက်၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် တဖက်သတ်အနိုင်ဒီဂရီ ရရှိခဲ့ပြီး၊
ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်အရောက်တွင်ကျူးးကျော်သူများအားဖယ်ရှားရန်ဟုဆိုကာ ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်အင်အား ရာချီဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်လာရောက် ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစား
သတင်းဓါတ်ပုံ- Linn Kon
ယနေ. (၁၃-၆-၂၀၁၄) နေ.လည် ၁၁ နာရီခန်.တွင်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်
အင်အား (၂၀၀)ခန်.သည် အပြန်အလှန်အမှုဖြစ်ပွားနေသောသင်္ဃန်းကျွန်း
မြို.နယ်၊ ဇ/မြောက်ရပ်ကွက်သို.ရောက်ရှိလာပြီး အတင်းဖယ်ရှားရန် ကြိူးစားခဲ့သည့်အပေါ် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှမခံမရပ်နိုင်သဖြင့်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို.နယ်တရားရုံးသို. ဥပဒေနှင့်အညီ သွားရောက်တင်ပြ
လျှောက်ထားရာနေ.လည်(၁၂း၁၅)တွင် တရားရုံးမှ မူလအနိုင်ရ
အမိန်.ဒီဂရီက ပြန်လည်ဆိုင်းငံတားမြစ်ကြောင်း နှုတ်မိန်.ပေးလျက် (၂၆-၆-၂၀၁၄) နေ.တွင် တရားနိုင်-တရားရှူံးတို.မှရုံးတော်သို. အပြန်အလှန်
ပြန်လည် တင်ပြကြရန် အမိန်.ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
နေ.လည် (၁၂း၁၅ ) မိနစ်ခန်.တွင် အင်အားသုံးရောက်ရှိလာသော ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်(၂၀၀)ခန်.ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသိများတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ ရှပ်နီတဦးကို ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့က တရားရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ ဆူပူအောင် သွေးထိုးလှုံဆော်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ စွဲချက်တင် ခံထားရပါတယ်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ချခံရနိုင်တယ်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။
ရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆွန်ဘတ်ဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာသက်ဆင်နဲ့ မစ္စစ် ယင်းလပ် ရှင်နာဝတ်ကို ထောက်ခံသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဆင့်ခေါ်ခံခဲ့ရပေမယ့် သွားရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပဲ “ဖမ်းနိုင်ရင် လိုက်ဖမ်း” ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို သူ့ရဲ့ ဖေဘွတ်စ် လူမှုကွန်ရက် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆွန်ဘတ်ကို ဘန်ကောက်မြို့အရှေ့ပိုင်းက ချွန်ဘူရီခရိုင်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိပြီး အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ ဆင့်ခေါ်တာကို တိမ်းရှောင်ခဲ့မှုအတွက်လည်း စွဲချက်တင်ခံရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရာဇ၀တ်မှုနှိမ်နင်းရေးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ ရဲမှူးကြီး ပရာ့ဆွတ်ချောကီ (Prasobchoke)က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးတွေက ဆွန်ဘတ် တင်ခဲ့တဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကနေ ခြေရာခံလိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ခုံရုံးတင်ခံရနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းတရားရုံးက ဆွန်ဘတ်ကို နောက်ထပ် မေးမြန်းစစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့က ထိုင်းရဲဌာနကို နောက်ထပ် ၁၂ ရက် ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်က ဆန္ဒပြသူ ၉၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ရှပ်နီနဲ့ ရှပ်ဝါ ဆန္ဒပြပွဲမျိုးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ဆောင်ဖို့ ဆွန်ဘတ်က ပုံမှန် စည်းရုံးလှုံဆော်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ ပြည်ပက သွင်းလာတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေမှာ အညွှန်းကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ဖော်ပြမထားဘူးဆိုရင် စိတ်မချရတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ မန္တလေးတိုင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ စားသုံးသူရေးရာဌာနရဲ့ တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးတင့်ဆွေကြူးက ပြောပါတယ်။
ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်း ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ခန်းမမှာ လုပ်တဲ့ စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲမှာ သူက ခုလို ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ မြန်မာဘာသာနဲ့ အညွှန်းတွေကို ဖော်ပြမထားတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို
အရေးယူဖို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းထားတာတော့ မရှိသေးဘူးလို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံထဲက စားသောက်ကုန်တွေ အများအပြား ၀င်ရောက်နေပြီး မြန်မာဘာသာနဲ့ အညွှန်းတွေကို လုံးဝ ဖော်ပြမထားပါဘူး။
အများစုဟာ တရုတ်ဘာသာ၊ ထိုင်းဘာသာတွေနဲ့ပဲ ဖော်ပြထားပြီး အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့တောင် ဖော်ပြမထားတာမို့ ပြည်သူတွေ နားလည်အောင် အညွှန်းဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းမျဉ်း ရှိသင့်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ပုဒ်မ(၄၃၆)ပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ပိတ်ပင်
ပုဒ်မ(၄၃၆)ပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ပိတ်ပင်ကြောင်း
မြစ်ကြီးနားမြို.ကို ရောက်ရှိနေသော ၈၈ မျိုးဆက်မှ ကိုမာကီးမှ
Tomorrow ကို ယခုလိုပြောပြပါသည်။
" အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်း
အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းဖို့မြစ်ကြီးနားမြို့ကို ဒီကနေ့၊ နေ့လည်မှာ
မနက်ဖြန်(၁၃၊ ၆၊၂ဝ၁၄)နေ့၊ နေ့လည်မှာ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီး
မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဒေသခံကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ညစာစားရင်း
ဟောပြောပွဲကို CITY PARK HOTEL မှာကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့်၊
ခွင့်ပြုချက်တင်တာ တစ်ရက်နောက်ကျလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ခွင့်ပြုဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရလို့ ခန်းမက မငှားရမ်းရဲတော့ဘူးဆိုရင်လည်း
ကျနော်တို့ကတော့ လမ်းမပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဟောပြောပွဲ
အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်" လို.ပြောကြားခဲ့
Samsung ဟာ Apple ရဲ့ iPad နဲ့ iPad Air ကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကျောက်သင်ပုန်း ကွန်ပြူတာ အသစ် နှစ်မျိုးကို မိတ်ဆက် ပြသ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Tab S ၁၀.၅ လက်မ ဗားရှင်းနဲ့ ၈.၄ လက်မ ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ ၃၉၉ ဒေါ်လာဆီ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ နှစ်ခု စလုံးဟာ ဟာ မျက်နှာပြင် အရည်အသွေး 2,560 x 1,600 SuperAMOLED ရှိတာကြောင့် iPad ရဲ့ Retina Display ထက်တောင် resolution ပိုကောင်း နေပါတယ်။ ကင်မရာက 8.1 megapixel ရှိပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာ ကတော့ 2.1 MP ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက် အနေနဲ့က RAM 3GB ဖြစ်ပါတယ်။ RAM 1GB, 2GB လောက်ပဲ ထုတ်နေကြတဲ့ အချိန် Samsung ရဲ့ RAM 3GB Tablet က ပိုမို ထူခြား များပြား နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Storage က 16GB ကနေ စပြီး အစားစား ၇ှိပါတယ်။ အထူက ၀.၂၆ လက်မပဲ ရှိတာ ကြောင့် အင်မတန် ပါးတဲ့ Tablet လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Fingerprint reader လည်း ပါရှိ ပါတယ်။ ၁၀ လက်မ ဗားရှင်းက တစ်ပေါင်သာ လေးပြီး ၈.၄ လက်မ ဗားရှင်းက ၁၀ အောင်စသာ လေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပါးပါး၊ ပေါ့ပေါ့ Tablet အမျိုးအစား များပါပဲ။
Samsung Galaxy Tab S များကို မကြာမီ ဈေးကွက် ဖြန့်ချိ တော့ မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိ ရပါတယ်။
(၄) ညဘက်အိပ်နေစဉ် တစ်ဘက်တည်း စောင်းပြီး မအိပ်ပါနှင့်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှည့်ပေးပါ။
(၅) ကိုလက်စရောဓာတ်ကို လျော့ပစ်ပါ။
အသက်(၉၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လေထီးခုန်ခဲ့သည့် ဂျော့ဘုရှ် (စီနီယာ)
အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဂ်ျဘုရှ် (စီနီယာ)က ၎င်း၏ အသက်(၉၀)ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အပျော်တမ်း လေထီးခုန်ချခဲ့သည်။
မိန်းရှိ ၎င်း၏ နွေရာသီ စံအိမ်အနီးတွင် ကြာသပတေးနေ့က ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် ဘုရ်ှက လေထီးခုန်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်၏ (၄၁)ဦးမြောက် သမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ ဘုရ်ှသည် အမေရိကန် စစ်တပ်၏ လေထီးတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှင့်အတူ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် သိုင်းကြိုးချည်နှောင်ကာ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့သည်။
သမ္မတဟောင်း၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ တစ်ဦးက ဘုရ်ှသည် အပြာ၊ အဖြူနှင့် အနီရောင်များ ပါရှိသည့် လေထီးဖြင့် ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့ ချောမောစွာ ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘုရ်ှသည် လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်က မွေးနေ့တွင်လည်း အလားတူ စွန့်စားမှုမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသက်(၉၀)ပြည့်ချိန်တွင်လည်း အမှတ်တရ လေထီးခုန်ဦးမည်ဟု ကြိုတင် ကတိပြုခဲ့ဖူးသည်။
ဘုရှ်၏ ဘဝတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် လေထီးခုန်ဖူးသည်မှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းကဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာထက်တွင် ၎င်း၏လေယာဉ် ပစ်ချခံရသဖြင့် လေထီးဖြင့် ခုန်ထွက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့က လေထီးခုန်ခြင်းမှာမူ ၎င်း၏ ဘဝတွင် အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဖြစ်လာသည်။
“မိန်းမှာ အံ့ဩကျေနပ်စရာ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က လေထီးခုန်နိုင်လောက်အောင် ကျန်းမာရေး ကောင်းနေဆဲပါ”ဟု ဘုရ်ှက Twitter တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ထူးဆန်းသောနည်းဖြင့် သေဆုံးသူများ နှင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သူတွေရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြား အလွဲများ
မဟာသန္တိသုခကျောင်း အင်အားသုံးဖယ်ရှာမှု ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ ကန့်ကွက်
ကျောင်းရှိ ဆရာတော်များကို ရွှေစင်စင်္ကြာ ကားနှင့် ပင့်ဆောင်သွား